Uhuru Kenyatta: “Ciidamada Kenya waa sii joogi doonaan Soomaaliya , ilaa iyo inta ammaanka la soo celin doono..” - Latest News Updates
Uhuru Kenyatta: “Ciidamada Kenya waa sii joogi doonaan Soomaaliya , ilaa iyo inta ammaanka la soo celin doono..”
Madaxwaynaha Uhuru Kenyatta ayaa Khamiistii sheegay in Ciidamada Difaaca Kenya (KDF) ay sii joogi doonaan Soomaaliya illaa iyo inta ammaanka la soo celin doono inkastoo miisaaniyadda hoos u dhigtay bilawga bilawgii askarta ay ka baxayaan dhammaadka July.
Si kastaba ha ahaatee, magdhawga Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in uu hoos u dhaco K1million iyo Ksh3.5 bilyan ee labada sano ee soo socota ilaa bisha Juun 2015, taas oo muujinaysa hoos u dhigidda si tartiib tartiib ah ee ciidamada.
“Si loo ilaaliyo Kenya iyo gobolkeenna, ciidamadeennu waxay sii wadi doonaan hawlgallada wadajirka ah ee Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (Amisom),” ayuu yiri Kenyatta.
Kenya ayaa 4,660 askari u dirtay Soomaaliya bishii Oktoobar 2011 ka dib markii weeraro aan toos ahayn iyo afduub loo geystay dad rayid ah oo ka yimid xuduudaheeda.
Midawga Afrika wuxuu doonayaa dhammaan ciidamadii ay ka baxeen Bishii December 2020, laakiin Kenya waxay doonaysaa in dib loo dhigo dib u dhac.
Al Shabaab waxa ay Kenya ku soo qaadaa weeraro isdaba joog ah, inta badan gobolka gobolka ee la xariira Soomaaliya, si ay cadaadis ugu saaraan dawladda Kenya in ay ciidamadeeda nabad ilaalinta ah ka baxdo Soomaaliya.
Midowga Afrika ayaa doonaya in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan mas’uuliyadda ammaanka dalka.
Bulshada caalamku waxay bixisaa $ 1,028 (Sh103,828) askari kasta bishiiba, dawladahooda kala duwan ayaa markaa ka jaraan qiyaastii $ 200 (Sh20,200) kharashaadka maamulka, iyaga oo ka tegaya guriga $ 800 (Sh83,628).